महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह परिवारलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण
November 10, 2021 N88LeaveaComment on महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह परिवारलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण
दार्चुला । गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम समाज मेरिल्यान्ड अमेरिकाले बेपत्ता जयसिंह परिवारलाई रु दुई लाख आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । फारवेस्ट राइडरको सहआयोजनामा सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित एक कार्यक्रममा राइडरका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष भरतविक्रम शाहले जयसिंह धामीका श्रीमती राजन्ती धामीलाई सो सहयोग […]
ओखलढुंगामा बालकृष्ण ढुंगेल र यज्ञ सुनुवार समूहबीच टकराव
November 10, 2021 N88LeaveaComment on ओखलढुंगामा बालकृष्ण ढुंगेल र यज्ञ सुनुवार समूहबीच टकराव
ओखलढुंगा । नेकपा एमालेकाे १० औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गुटगत विभाजनले सहमतिमा नहुने भएकाे छ । दुई गुटबीचकाे विवाद र माओवादीबाट प्रवेश गरेका समूहलेसमेत भाग खाेजेपछि निर्वाचन निश्चित भएकाे हाे । मंगलबार भएकाे सचिवालय बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निर्वाचनबाटै प्रतिनिधि छनोट गर्न दबाब दिएका थिए । सचिवालय बैठकबाटै नेताहरुले गुटका मान्छे प्रतिनिधि लैजान खाेजेपछि निर्वाचनमा जान […]
पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्री देउवाकाे खुला चुनौती- ‘शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुस्’
November 10, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्री देउवाकाे खुला चुनौती- ‘शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुस्’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चुनौती दिएका छन् । गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले बुधबार बिहान शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउन शाहलाई चुनौती दिएका हुन् । आफूले प्रजातन्त्रबाहेक सबै कुरा सुम्पिन तयार छु भनेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई भनेको तर उनले आफूलाई जेलमा […]
November 10, 2021 N88LeaveaComment on एमाले महाधिवेशन – यी हुन् प्रमुख पदका दाबेदार, को को हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष भन्दा अन्य पदका लागि रस्साकस्सी शुरु भए पनि निर्वाचित हुने १५ पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार भन्दा पुरानै अनुहारले प्राथमिकता पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। ओलीको विकल्प दिन अहिलेको अवस्थामा कोही तयार नभएपछि अध्यक्ष भन्दा १४ पदाधिकारीमा रस्साकस्सी देखिदा पनि पुरानै अनुहारले प्राथमिकता पाउने अवस्था छ। विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम […]
November 10, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन – गठबन्धन बनाउने पाँच दलको निर्णय, १९ मा कति जित्छ एमालेले ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका छन्। ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका २० राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद फागुन २० मा रिक्त हुँदैछ।सोमबार बसेको शीर्ष नेतासहितको बैठकले राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय […]
आगामी चुनाव – सिङ्गो एमाले भर्सेज पाँच दलको गठबंधन
November 10, 2021 N88LeaveaComment on आगामी चुनाव – सिङ्गो एमाले भर्सेज पाँच दलको गठबंधन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुलाई आउँदो निर्वाचनमा जितेर देखाउन भन्दै दिनदिनै चुनौती दिदै आएका छन् । ओली मात्र होइन एमालेका अधिकांश प्रमुख नेताहरु अथवा एमाले स्थायी कमिटीका नेताहरु गठबन्धनका नेताहरुलाई निर्वाचन जित्न चुनौती दिन थालेका छन् । अझ ओलीको प्रमुख निशानामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का […]
जब यति ठु्लो खबर माधब नेपालको कानमा पुग्यो !
November 10, 2021 November 10, 2021 N88LeaveaComment on जब यति ठु्लो खबर माधब नेपालको कानमा पुग्यो !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले का डडेलधुरा अध्यक्षसहित ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताले एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी मा प्रवेश गर्न लागेका छन् । एमालेको बहुमत संख्याको जिल्ला कमिटी नै समाजवादीमा प्रवेश गर्न लागेको छ। ठूलो संख्यामा एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने भएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बुधबार डडेलधुरा जाँदै छन्। समाजवादीमा प्रवेश […]